Magacaabistaydii iyo maagistaydii: Laba Isku Lamaanaa Qormadii: 21aad iyo 22aad, Boobe Yuusuf Ducaale – Araweelo News Network (Archive)
Guddidan Fulinta ayuu soo qaddimay mudane Guddoomiye Silaanyo maalintaas:
Suldaan Shakiib Cabdilqaadir
Guddoomiye, Siilaanyo, hadalkiisii gaabnaa wuxu ku soo af-jaray: “Haddii la yidhaa la noqo Guddida Fulinta, waa in aan dib u soo dhisaa.”
Sidii dhaqanku ururku ahaa, Kal-fadhigii ayaa la yar xidhay si dibadda loogu baxo oo afka la isu geliyo, loogana wada-tashado wixii laga yeeli lahaa cod-bixinta Guddida Fulinta. Waqti badan laguma qaadan wada-tashigii degdegna waxa loogu soo noqday qolkii shirka. Waa gelin danbe iyo xaruntii maamulka ee SNM ee Diridhabe.
Codkii ayaa la qaaday, waxaanay natiijadii noqotay:
Oggol: 14 cod,
Diiddan: 20 cod,
Aammus: 1 cod,
Waa 35 cod iyo Guddoomiyihii Kal-fadhiga oo aan codkiisii dhiiban oo tirada guud ka dhigaya 36 cod. Hadda Guddoomiye Siilaanyo codkiisa wuu dhiibtay oo, marka arrin Guddida Fulinta ku saabsan laga hadlayo xilka Shir-guddoonka wuxu ku wareejin jiray Guddoomiye-ku-xigeenka Kal-fadhiga oo had iyo jeer wuxu odhan jiray: “Waa arrin I khuseysa oo guddoomin maayee waan ka doodayaa.” Sidaa ayuu ku soo dhex fadhiisan jiray xubnaha Golaha Dhexe oo uu doodda iyo cod-bixintaba uga qayb- qaadan jiray.
Kal-fadhigii 1aad ee caadiga ahaa ee Golaha Dhexe ee SNM sidaa ayuu ku diiday Guddidii Fulinta ee ugu horreysay ee uu soo dhisay Guddomiyuhu. Dhacdadani waxay bud-dhig u noqotay muranka riiq-dheeraaday ee SNM ku kala qaybsan tahay ilaa maanta. Sida codka loo kala bixiyay ayuu Golaha Dhexe u qaybsami doonaa taas oo aan abidkeed ka hadhin SNM.
Qaadan-waa iyo af-kala-qaad ayay ku noqotay Mujaahid Siilaanyo; in ay ku noqotona ma ay ahayn oo wuu garan karayay in aanu codka helayn, maxaa yeelay murankii badnaa ee Shirweynihii 5aad ka dhacayba waxa saldhig u ahaa xilal uu soo cel-celiyay oo murankaa saldhig u ahaa.
Cod-bixintii markii ay dhammaatay ayauu Siilaanyo soo booday oo yidhi: “Waxaan doonayaa in aan ogaado waxa lagu diidayo. In ay mid guud iyo mid gaar tahayba, anna dadka ayuun baan wax weydiinayee uur-ku-baalle ma ihi. Markaa in la ii sheego haddii aan reer ka tegay iyo…….”.
Xubno Golaha Dhexe ka tirsanaa ayaa hadalkii qaatay:
“Iyadoo Goluhu uu leeyahay in uu dib kuugu celiyo iyo in uu wada qaataba; waxa habboonaan lahayd in mid mid looga doodo oo ay ururka dantiisana tahay, haddana waa tii shalay Goluhu isku raacay”,
Maxamed Axmed (Dayib Gurey):
“Anigoo Kaahin la qaba, anna waxaan qabaa in aad adigu kelidaa soo dhisto, muddona ururka waad joogtay, waxaana laga yaabaa in aad fikradahaa badan ku jaho-wareerto.”
“Iyada oo Xoghayayaasha aad soo dhigtay kala badh ay kuwii hore yihiin, aniga oo is-leh kuwii hore tijaabada u galay hadday toosan yihiin kuwii hore inta kale way jiidan lahaayeen”.
Siciid Maxamed Nuur:
“In Goluhu shan nin oo shirku ku kalsoon yahay oo Guddoomiyaha la taliya ay saaraan”.
Maxamed Ibraahin Warsame (Hadraawi):
“Mid looma jeedo oo ah in adiga luggooyo lagaaga dhigo cel-celinta. Markaa aniga waxay ila tahay in aad nin walba shan daqiiqo siiso si loo ogaado qof walba.”
“Nin walba waraaq baa hor taal ee wuxuu diiddan yahay ha ku qoro.”
“Anigoo la qaba tii shalay in duuduub loo qaato, haddana la igu diiday, markaa waxay I la tahay in Goluhu go’aan ka gaadho diidmadu intee bay soconaysaa?”
Midhkaa Siilaanyo xaq buu u lahaa, waayo xeer kama qornayn inta jeer ee lagu diidi karo Guddoomiyaha Guddi-fulineed oo uu soo dhigay.
Kal-fadhiyada Golaha Dhexe ee SNM had iyo jeer waxa jiri jirtay khalkhaliso ku gedfan oo inta badan xubnaha babbiso ayaa loo tuuri jiray. Inta badan cir-ka-soo dhac ma ay ahayne, farshaxan laga soo shaqeeyay ayay u badnayd. Had iyo jeer waxa loo iilan jiray hadallo kutiri kuteen ah oo ahaa: “waxa la yidhi”, “waxa la sheegay”, “waxa la isla dhex marayay”, “la lahaa” iyo wax la mid ah. Hadallo shaabbadaha wata ayaa taxliil looga dhigi jiray Kal-fadhiyada.
Inta aanan Qormadaydan 21aad bilaabin, aan mar kale idin ka codsado in aydaan dan ka gelin cidna, oo aydaan u jawaabin. Meel ayaynu ku jeednaa qof iyo qolana uma jeedno. Intiinna qalinka haleelaysaa diyaar-garooba oo sida daadka u soo rogmada maalinta ay maqaalladaydu joogsan maayaan e’ ay yar hakadaan.
Kal-fadhigu intii aanu furminba waxa ka hor-timid mushkilad lagala soo guuray Shirweynihii oo aan la iska hubsanba markii go’aanka laga qaadanayay. Shirweynahaa 5aad waxa la tirtiray oo meesha laga saaray jagadii Guddoomiye-ku-xigeenka ururka. Sidaas oo keliya ayaa markaa loo arkayay, waxa se soo baxday in Guddoomiye-ku-xigeenka ururku isla markaana ahaa Guddoomiye-ku-xigeenka Kal-fadhiyada Golaha Dhexe. Bal adba! Si uu u furmo Kal-fadhigu waa in marka hore la doortaa shir-guddoonka oo uu ka magacawnaa oo keliyi Guddoomiyaha oo Shirweynihii lagu soo doortay. Shir-guddoonku wuxu ka koobnaa: Guddoomiyaha, Ku-xigeenka iyo Xoghayaha Golaha Dhexe.
Kal-fadhigu wuxu ka furmay Diridhabe 21/3/87kii. Xoghayihii Golaha Dhexe aniga ayaa la ii doortay, Ibraahin Meygaag Samatarna Guddoomiye-ku-xigeenka Kal-fadhiga oo markan oo keliya ah, bal inta maaro loo helayo mushkiladdan jagada nagu soo bannaanaatay ee aannaan ka fiirsan markii la go’aaminayay.
Raalli kama aan ahayn in xilkaa Xoghayaha Golaha Dhexe la ii doorto oo eedeyntiisa ayaa badnayd. Kal-fadhigani intii uu socdayna tiraba laba jeer ayaan diiday ee Golaha ayaa iga aqbali waayay, anna markii danbe waxaan go’aansaday in aan lambarka xejisto. Cod ayaa la geliyay istiqaaladdaydii, waxaanu codkii u dhacay sidan:
In aan hawsha wado:
Oggol: 23 cod,
Diiddan: 5 cod,
Waxay arrintii ku dhammaatay hawsha oo aan sii wado iyo Guddoomiyaha oo yidhi: ”Waxaan qabaa in Golaha Dhexe Guddi u saaro, marka aynu dhammaynno hawlaha Guddida Fulinta.”
Shaqo xun oo aan nebcahay ma ahayn, bal se waxay ahayd hawl muhiim ah oo xiiso leh. Iyada oo hawl badnayd ammaano iyo xafidaad badanna u baahnayd ayaanu ururku u hagar bixi jirin. Wixii qoraal, ajende iyo go’aammo aad Shirweyne ama Gole Dhexe u qaybiso cidina ma xafidi jirin. Mid waliba hudheel ama mefrish uu ku qayilay ayuu waraaqaha kaga tegi jiray. Markii uu u baahdo ayuu koobi kale soo doonan jiray. Muran baa bilaabmi jiray waad qaadatay iyo maan qaadan. Beryihii danbe waa laga saxeexi jiray. Gef qof sameeyay haddii ay ku dhintaan toban qof laba Cali is-ma weydiin jirin, erey hadduu qaldamo ama Idaacaddu weedh aan saxnayn sii dayso cirka iyo dhulka ayaa isku dhegi jiray. Dhinaca kale markaad iska taagto xafiisyada maamulku waxaad u baahato kuma ay siinayn, haddana waxay doonayeen in ay wax waliba si qumman u socdaan.
Markii shir-guddoonkii la dhisay, waxa lagu horreeyay oo maalmo lagu jiray is-waafajintii Dastuurka iyo Habka Xeerka Dastuurka iyo qodobbo kale oo la xidhiidhay hawlaha ururka. Waxa ka mid ahaa Xoghayntii Taakuleynta iyo Gaadiidka oo la raaciyay Waaxda Ciidammada Xoreynta. Waxa looga gol lahaa Xoghaynta Ciidammadu si ay hawl-gal u noqoto inay gacanta ku wada hayso oo ay amarkeeda ku baxaan saddexanka ah: Ciidammada, Taakuleynta iyo Gaadiidka. Fikrad fiican ayay ahayd, maxaa yeelay intaasiba gacmo kala duwan ayay ku jireen, waanay kala hadhi karayeen iyada oo loo baahnaa in ay is-raacaan. Dood kulul ayaa arrintan ka dhacday, markii danbena cod baa lagu kala baxay. Maamulku wuxu doonayay in aan la isku darin Waaxahaa saddexda ah, colka ka soo hor jeedayna waxay doonayeen in la isku daro. Wax la yaab leh arrintani ma ahayn oo maamulku xilal badan oo uu dadka u qaybiyo ayuu doonayay ama door-bidayayba.
Shirarku sidoodaba hawlo badan ayay qabtaan, markaynu se dareenkeenna eegno Soomaali ahaan innaga shirarku waxay I noo la macno yihiin doorasho. Hawlaha kale oo dhan dan laga magalo. Waxay I nagaga dhegtaa yaa la dooranayaa? Dastuur, Barnaamaj Siyaasiya iyo Go’aammo kale midna dan kama gallo. Maalmaha shirarka dooduhu jiraan madashu way madhan tahay, maalmaha wax la dooranayana mid aan ergey ahayn ayaad khaati ka joogsanaysaa oo odhanaya codka ayaan dhiibanayaa.
Waxa xataa la yaab leh dhadhanka aynu u leenahay dadka la dooranayo. Sifooyinka aynu dadka ku dooranno weynaan ayaa ku jirta oo aan ahayn da’da bal se mararka qaarkood dherer iyo buurnaan loo noqdo. Way adag tahay nin gaaban oo jimidh yar sida loo doortaa.
Aniga oo shirka shir u aqaan una aamminsan ee aan doorasho u aqoon, ha I la yaabina haddaan doorashooyinka ku yara hakado. Waa meelaha ururka ay wax badani kaga xumaadeen. Kala-qaybsanaanta iyo kala-tagga SNM-na meelaha uu ka soo ambo-qaadayaa waa halkan.
Doorashadii Guddida Fulinta:
Guddoomiye Siilaanyo, wuxu caado u lahaa in uu dhowr maalmood yidhaa wada-tashi ayaan ku jirayaa si aan Guddida Fulinta u soo dhiso. Axaddii, 29kii Maarj, 87kii, barqadii ayaan soo maray barxadda Kaara-mardha oo ah Hudheelkii Guddomiyuhu deggenaa. Waxaan daadahaynayay yarkayga Colaad. Siilaanyo waxa la fadhiyay Shakiib Cabdilqaadir oo malahayga wada-tashigii ayay ku jireen. Shakiib ayaa kacay, markaasaan Guddoomiyihii bariidiyay. Wuxu igu yidhi: “Wada-tashigii ayaan ku jiraa, adna Golaha Dhexe ayaad ku jirtaaye, miyaanad waxba I odhanayn.” Intii uu sida I lahaa waan taagnaaye, waan la fadhiistay. Waxaan ku idhi: “Ninkan kaa tegay waa Shakiib. Waa Suldaan. Gaadiid iyo Taakuleyn ayaad u dhiibtaa, dadkuna wuu wada baahan yahay. Shakiib ha dilin ee xilkan ka daa oo mid kale u dhiib oo uga dhib yar oo uu ku badbaado.” Hadal kale ugu ma darin e’ intaa ayaan kaga tegay.
31kii Maarj, 87kii, maalin Salaasa ah ayuu Guddoomiyihii soo dhigay Guddidii Fulinta. Kal-fadhiga Golaha Dhexe subaxdaa waxa joogay 36 xubnood oo Golaha Dhexe ah, Guddoomiyuhuna sidan ayuu u soo qaddimay Guddida Fulinta:
“Aad iyo aad waxaan ugu dedaalay la-tashigii iyo dareenkii guud in aan mar walba tixgeliyo. Iyadoo dadka intiisa badani ay culayska saarayeen Waaxda Ciidammada Xoreynta, 80% magacyada la ii keenay waxa u badnaa magac ama nin. Anna kii uun baan soo dhigay. Dadka qaar ayaa hebel ha laga daayo odhanayay tiina waan tixgeliyay. Qolada Baarrey iyaga oo wada jira ayay aaraadooda ii wada keeneen. Waxaan caam ahaan wada tixgeliyay aagagga laakinn ku maan xisaabtamin reer hebel intaa sii, Guddidii Fulintuna waa tan:
Ilaalinta Tayada Agabka (Consumer Protection) Qybtii Labaad Prof. Abdi Yusuf